Kedu ihe kpatara ntutu ji eto na azụ na otu esi ewepụ ha | Ndị nwoke mara mma
Alicia tomero | 21/05/2022 11:28 | Akpụchasị, Nlekọta onwe onye
The canons nke ịma mma na ndị ikom na-esiwanye gbanwee ka siri protocol na isiokwu nke ntutu isi. Na mmadụ na-enwe nrụgide n'azụ ntutu zuru ezu apụtaghị na ọ dịghị etinye aka n'ihe a na-amanye, ma n'ezie ọ na-achọsi ike. ihe mere ntutu ji eto n'azụ na otu esi ewepụ ha
ngwọta e nwere ọtụtụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile a na-enye bụ nwa oge. Naanị iwepụ ntutu laser bụ nke ga-ejedebe na ntutu isi n'akụkụ ọ bụla nke ahụ n'ikpeazụ. Ma usoro nke ọgwụgwọ ọ bụla adabaghị na mmefu ego achọrọ, ma ọ bụ site na nkwa nke ịsị na ọ gaghị ata ahụhụ ntakịrị.
1 Gịnị kpatara ntutu ji eto n'azụ?
2 Otu esi ewepu ntutu n'azụ
2.1 Kpụ afụ ọnụ
2.2 Ude depilatory
2.3 Ịme waksị
2.4 mwepụ ntutu laser
Gịnị kpatara ntutu ji eto n'azụ?
Ụmụ nwoke na-enwekarị ntutu karịa ụmụ nwanyị n'ihi oke testosterone, homonụ nke na-emetụta uto ntutu. Ọtụtụ ụmụ nwoke na-ata ahụhụ site na ntutu dị mma, ma ọ bụ karịa. dabere na mkpụrụ ndụ ihe nketa gị. Ma ihe doro anya bụ na ha nwere ike iyi ka ọ bụ hypertrichosis, pathology nke na-ata ahụhụ site na ebe ntutu nwere ike ito oke oke, gụnyere azụ.
Ụmụ nwanyị na-ata ahụhụ site na pathology ọzọ a na-akpọ hirsutism, ebe ha na-ata ahụhụ site na a oke ntutu isi n'ọtụtụ akụkụ ahụ ya, ọbụna ịbụ otu n'ime ebe ndị ahụ azụ. Hirsutism na-abụkarị ihe mgbaàmà nke ọrịa ka ukwuu ma ọ bụ ihe na-egosi nsogbu.
Ụmụ nwanyị nwere ike na-ata ahụhụ site na polycystic ovary, cancer ovarian, hyperthecosis (mmụba mmepụta nke ovary), etuto dị na gland adrenal, Cushing's syndrome (oke corticosteroids) ma ọ bụ ịṅụ ọgwụ ụfọdụ na-ahapụ homonụ nwoke. Ihe a niile ga-emetụta inwe ntutu isi. Ọ dị obere na ha nwere ike ịnweta ya na azụ, ma ọ nwere ike ịbụ ikpe ahụ.
Otu esi ewepu ntutu n'azụ
Ụmụ nwanyị nwere ike ibelata ntutu isi ha site n'ime nlekọta ahụike na ịgwọ nsogbu hormonal gị site n'enyemaka nke endocrinologist ma ọ bụ ọkachamara n'ọrịa ụmụ nwanyị. N'aka nke ọzọ, ị nwekwara ike belata oke ntutu site na iji a ịchọ mma ma ọ bụ ọgwụgwọ laser.
Ụmụ nwoke nwekwara ike ịme nlekọta ahụike ma ọ bụrụ na enwere ụdị ọ bụla ọrịa hormonal ma ọ bụ endocrine. Otú ọ dị, dị ka n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ ga-adị mkpa ịmalite ọgwụgwọ mma iji kpochapụ ntutu a na-ahụ anya.
Kpụ afụ ọnụ
Ọ bụ usoro dị mfe, ngwa ngwa na enweghị mgbu. Ị ga-achọ enyemaka nke onye ọzọ iji nyere gị aka iwepụ ntutu isi n'akụkụ ndị ahụ niile ị na-apụghị iru. Ụzọ kachasị mma isi malite bụ site n'iji mkpa mkpa ihichapụ ntutu niile siri ike na nke siri ike.
Enwere ike ịme nyocha kachasị mma mgbe e mesịrị site n'enyemaka nke igwe na-akpụ isi nke nwere otutu mbelata na nhazi isi ya. Buru n'uche na iji agụba na-akpụ isi ọ naghị eme ka ntutu dị n'azụ sie ike kpamkpam. A na-enweta ezigbo ntutu isi na agụba ma maka nke a, a ghaghị ime ya n'otu ụzọ ahụ a na-enweta ntutu isi na ihu.
anyị ga-enweta ịcha gel ma ọ bụ ụfụfụ ma kpuchie azụ dum na ude. Mgbe ahụ, anyị ga-enweta ntutu ahụ site na ịkwanye agụba megide ntụziaka nke ntutu isi, n'ezie, ọ ka mma site n'enyemaka nke onye ọzọ na nso a sink na-ehichapụ agụba na nyocha ọ bụla.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịsa ahụ mgbe akpụchara ya iji wepụ ntutu ọ bụla rụrụ arụ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-asacha ebe ahụ ka ọ ghara ịkpasu ya iwe karịa na tinye ude mmiri na-enweghị isi iji mee ka mgbakasị ahụ dị jụụ.
Ọ bụ ụdị ọzọ nke iwepụ ntutu isi, ebe a na-eme ngwa ngwa ntutu dị ka ịkpụ ntutu. Ude ndị a nwere ihe ndị na-eme ihe na keratin nke ntutu na-eme ka e bibie ya. A na-etinye ude ahụ na akpụkpọ ntutu, hapụ ya ka ọ rụọ ọrụ maka nkeji ole na ole wee mesịa A na-ewepụ ya na aka site n'enyemaka nke spatula. Na ụdị ịkpụ ntutu a na-ewe ntakịrị oge ka ọ pụta ma dị ka mgbe ọ bụla ọ ka mma ịnweta onye na-enyere gị aka na ịkpụ ntutu.
Ịkwa akwa bụ usoro dị mfe, ma na ndọghachi azụ na ọ nwere ike na-egbu mgbu, e nwere ndị na-enweghị ike iburu ntutu isi. Eziokwu dị na ihu ọma bụ na ntutu ga-ewe ogologo oge ka ọ pụta.
mwepụ ntutu laser
Ọ bụ ihe ọzọ kachasị mma iji kwụsị ntutu isi. Ọ bụ ọgwụgwọ dị oke ọnụ ma ọ na-ewe ọtụtụ ọnwa ọgwụgwọ iji kwụsị ntutu isi na-eto azụ. A ga-etinye laser na mpaghara ahụ iji bibie ntutu isi na gbochie ma ọ bụ gbuo oge uto ntutu. N'ọtụtụ ọnọdụ, iwepụ ntutu laser na-adịkarị irè, ma n'ọnọdụ ụfọdụ, a ga-achọ oge nhazi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Mụ nwoke Stylish » Nlekọta onwe onye » Ihe mere ntutu ji eto n'azụ na otu esi ewepụ ha